२ डलरमा किनेको थोत्रो फोटो निस्कियो निकै बहुमूल्य, मूल्य सुन्दै उड्यो होस - Naya Pusta
२ डलरमा किनेको थोत्रो फोटो निस्कियो निकै बहुमूल्य, मूल्य सुन्दै उड्यो होस
Naya Pusta २०७४ मंसिर १५ गते प्रकाशित
एजेन्सी। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाका एक दम्पत्तीले २ डलरमा किनेको एउटा फोटो निकै बहुमूल्य निस्किएको छ । त्यो फोटो त्यतिसम्म बहुमूल्य होला भन्ने उनीहरुलाई अनुमान नै थिएन । हालै उनीहरुले त्यो फोटो ५० मिलियन डलर (५० करोड नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी) मा बिक्री गरेका छन् ।
क्यालिफोर्नियाका रेण्डी गुजारो र उनकी श्रीमती लिण्डा पुराना कुराहरु संकलन गर्ने शौखिन छन् । उनीहरुले पुराना किताब, सिक्का, टिकट लगायतका कुराहरु संकलन गर्छन् । यत्तिकैमा उनीहरुले २०१० मा यो फोटो एउटा कवाडी पसलमा भेटेपछि किनेका थिए । सन् १८०० को यो फोटोमा केही मानिसहरु ग्राउण्डमा खेलिरहेका थिए । यो फोटोलाई रेण्डीले ध्यानपूर्वक हेरे । फोटोमा उनले बिली द किड र उनका साथीहरु भएको भेट्टाए ।
बिली द किड एक अमेरिकी गनफाइटर थिए जसले १८७८ मा न्यू मेक्सिको टेरीटोरी लिंकन कन्ट्री वारमा भाग लिएका थिए । बिलीले ८ जनाको ज्यान लिएको र यही अपराधमा जेलमा हुँदा १८८१ मा बिली पनि मारिएको विश्वास गरिन्छ । रेण्डी दम्बत्तीले यो बिली द किड भएको पत्ता लगाए । तर उनीहरुले पहिले यस विषयमा गहिरो अनुसन्धान गरे । अनुसन्धानमा बिली नै भएको पुष्टि भएपछि उनीहरुले यो फोटो बेच्ने सोच बनाए ।
तर कोही पनि यो तस्वीर किन्न तयार भएनन् किनकि रेण्डी र लिंडासँग यो तस्वीर सक्कली भएको प्रमाणित गर्ने कुनै आधार थिएन । रेण्डी र लिण्डाले आशा छाडेनन् । उनीहरुले अर्को ३ वर्षसम्म यो फोटोबारे अनुसन्धान गरे । त्यसपछि उनीहरुले यो फोटोलाई फेसियल रिकग्निशन सफ्टवेयरको सहायताले सक्कली साबित गरे । साथै उनीहरुले नेशनल जियोग्राफीसँग किलेर बिली द किड न्यू इविडेन्स नामको डकुमेन्ट्री फिल्म बनाए । त्यसपछि उनीहरुले यो फोटोलाई ५० मिलियन डलरमा बिक्री गरे ।
तपाईंलाई थाहा छ ? नितम्ब ठूलो हुनुको अर्थ !
कुबेत : घरको काम गर्ने महिलालाइ मारेर फ्रिजभित्र कोचेपछि …
छोराले गरे आफ्नै आमाको बलात्कारको प्रयास, विरोध गर्दा ढुङ्गाले हानेर हत्या